Sefafi : “Aoka tsy hitera-pahavoazana ho an’ny vahoaka ny Frankôfônia” | NewsMada
Sefafi : “Aoka tsy hitera-pahavoazana ho an’ny vahoaka ny Frankôfônia”
Tsy azo iverenana intsony ny fandraisana ny fihaonana an-tampon’ny Frankôfônia. Aoka tsy hitera-pahavoazana ho an’ny vahoaka izany, raha ny fijerin’ny Sefafi.
“Aoka izany tsy hitera-pahavoazana ho an’ny vahoaka na hanakonana ny olana setrainy isan’andro vaky.” Fanambaran’ny Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena (Sefafi) hoe “Fihaonana an-tampony sy ny tena mahamaika”, ny 6 febroary, io. Momba ny hampiantranoan’i Madagasikara ny Frankôfônia izany, nampitainy tamin’ny tranonkalam-pifandraisana, omaly,
Efa nanome toky ny fanjakana, tsy maintsy tanterahiny. Tsy afa-kihemotra intsony… Anjarany izao ny mampiseho fa fantany tsara ny nataony, raha nangataka an’io izy. Tsy volana vitsivitsy mialoha ny fihaonana vao hangataka fanampiana, satria tsy vita ny nanangona ny vola ilaina.
Olom-bitsy no mahazo tombontsoa
“Olom-bitsy no hahazo tombontsoa avy amin’io fihaonana an-tampony mandritra ny herinandro io: ny mpitondra, angamba, indrindra ny “mpibizina” isan-karazany”, hoy ny fanambarana. Eo koa ny mpanao hotely sy ny toeram-pisakafoana, ny mpivarotra fiarakodia, ny mpikarakara lanonana sy ny tovovavy mpandray vahiny ao aminy…
Ny mba mety ho tombony maharitra: ny fotodrafitrasa. Tsy ho tratra ny fiantsonana iraisam-pirenena sy ny arabe vaovao mizara efatra. Mbola ikarohana famatsiam-bola any amin’ny tsy miankina ny fananganan-trano. Toy ilay hoe tanànan’ny Frankôfônia, tangoron-trano ahitana efitrano 200 antsoina, ivom-pivarotana hafa sy fijerena sarimihetsika, etsy Andohatapenaka.
Hadino ny vahoaka
Tsy hita intsony ao amin’ny rakibolan’ny mpitondra ny hoe manompo vahoaka. Heveriny fa faratampon’ny fiandrianana ny fivoahana lava any ivelany, ny fitantanana fihaonana an-tampony iraisam-pirenena.
“Andao àry hiroso amin’io fihaonana an-tampony io; amin’izay, mety ho voasarika hijery ny fahoriantsika ny hafa, ka mba mety harisika kokoa amin’ny fanampiana antsika”, hoy ihany ny fanambarana. Saingy takina ny mangarahara amin’ny fandaniana, ny lisitry ny tombontsoa mivaingana sy mateza entiny ho an’ny maro anisa.
Ny tetikasa narindra ho an’ny taona 2016, tokony hanokanana vola mitovy amin’izany ho an’ny olom-pirenena rehetra: ny any Bekily, Tsihombe sy Ambositra, fa tsy ny etsy Ivato sy Ambohibao na Andohatapenaka ihany. Raha fehezina, ho an’ny mponina rehetra eto Madagasikara.